ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ ဆန့်ကျင်ကြ (ဝါ) လွတ်ပြန့်စွဲမှ လွတ်မြောက်ရေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ ဆန့်ကျင်ကြ (ဝါ) လွတ်ပြန့်စွဲမှ လွတ်မြောက်ရေး
ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ ဆန့်ကျင်ကြ (ဝါ) လွတ်ပြန့်စွဲမှ လွတ်မြောက်ရေး
Posted by San Hla Gyi on Oct 21, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Think Tank | 105 comments
Satire တိုးတတ္ေရး စံလွၾကီး (ဝါ) လစ္ဘရယ္ စံလွၾကီး ေရးသည္။
ယနေ့ ကမ္ဘာတွင် ခေတ်စားနေသော အယူအဆနှစ်ခုမှာ အများ သိတော်မူပြီးသည့်အတိုင်း conservative နဲ့ liberal လို့ဆိုကြပါစို့။ တကယ်က ထိုအယူအဆနှစ်ခု ဝါ အုပ်စုနှစ်ခုမှာ အတော်ရှေးကျကတည်းက ရှိခဲ့သည်သာ ဖြစ်ပါ၏။ ဘယ်ကတည်းက စခဲ့သလဲဆိုရင် သေသေချာချာတောင် မသိပါ။ ဒါပေမယ့် အတော်ရှေးကျကတည်းက ရှိခဲ့တာတော့ သေချာလှသည်။ ဆီလျော်အောင် မြန်မာမှု ပြုရသော် ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများ နှင့် တိုးတတ်ရေးဝါဒီများ ဟုဆိုရမည် ထင်သည်။ ဂေဇက်သူကြီး၏ စကားလုံးကို သုံးစွဲရသော် လွတ်ပြန့်စွဲ ရှိသူများနဲ့ လွတ်ပြန့်စွဲမှ လွတ်မြောက်သူများဟုလည်း ဆိုနိုင်ပါ၏။ နှစ်သက်ရာကို ယူတော်မူကြပါကုန်။
ဆိုခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း အုပ်စုနှစ်ခု ဝါ အရှေ့နှင့်အနောက်ပမာ ဆန့်ကျင်ဘက် ဝါဒနှစ်ခု ဖြစ်ရကား အခါအားလျော်စွာ ဓမ္မဖိုက်တင်ပွဲလေးများလည်း ရှိကြကုန်၏။ ကျွန်ုပ်မှာကား ပြာမှုန်မှိုင်းရီ ရှေးအတိတ် ကာလဆီကပင်လျှင် ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ တယောက်ဟု ဆိုသော် ရပေသည်တမုံ့။ သို့ရာတွင် မန်းဂေဇက်ကို ဝင်ရောက်ပြီး စာပေရေးသားခြင်းနှင့် ဆွေးနွေးခြင်းများကို အတန်ငယ် ပြုလုပ်မိသည့်အခါ လွတ်လပ်သော လစ်ဘရယ်ဝါဒ သမားများ၏ ရှေးရိုးစွဲဝါဒများကို တိုက်ဖျက်သော စာများဖတ်ရသောကြောင့် တကြောင်း ပညာရှိ အယ်ဒီတာကြီး၏ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ချက်များကို နားထောင ်ရသဖြင့်လည်းကောင်း လစ်ဘရယ်ဝါဒ သမားများ၏ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော ဆောင်းပါးများမှာ မကြာခဏ sticky များရတတ်သည်ကို တွေ့ရသဖြင့်လည်းကောင်း ကျွန်ုပ်၏ ရှေးရိုးစွဲဝါဒများ၏ အမှားများကို ရုတ်ချည်း သိမြင်လာပါတော့သည်။
ထို့ပြင်တဝ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကို ဝေဖန်နိုင်သော ပညာရှင်များမှာ ဆောင်းပါးများ sticky ရတတ်ခြင်း မန်းဂေဇက် သတင်းစာကြီးတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြခွင့်ရပါက ပွိုင့် ၈၀၀ဝ ကျော်ရနိုင်ခြင်း ရွာသားကြီး ရွာသူကြီးများ အဖြစ်လည်း ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများ ဖတ်ရှုခွင့် မရသောဆောင်းပါးများကို ကြွားကြွားဝင့်ဝင့် ငွားငွားစွင့်စွင့် ဝင်ရောက် ဖတ်ရှုပြီး ထွားထွားပွင့်ပွင့် ဝေဖန်လေကန် နိုင်ခြင်း စသည်များကြောင့်လည်း ကျနော် လစ်ဘရယ်ဝါဒီ လုပ်လိုလှပါသည်။ အမှန်တော့ ရှေးအခါက ပွိုင့်ကို ဂရုမစိုက်သေးပါ။ သို့ပေသိ ရွာသားကြီး ရွာသူကြီးတို့၏ ကွန်မန့်များကို မြင်နေရပြီး ဖတ်ရှုခွင့် မရသောကြောင့် မြင်သာမြင်ရ မကြင်ရ မောင့်ကိုယ် ဖြစ်နေပါသဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ရှေးရိုးစွဲဝါဒများကို တော်လှန်ပြီး လစ်ဘရယ်ဝါဒီ ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။
ကဲ ဒီတော့လည်း လက်ညှိုးထောင် ကိုယ်ရောင်လင်းလိုက်မယ် ထင်လင်းစွာ မြင်ကြစေသတည်းပေါ့။
ထို့ကြောင့် ရှေးရိုးစွဲဝါဒနှင့် ရှေးရိုးစွဲဝါဒသမားများကို မထောက်မညှာ ဝေဖန်သင့်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့သည်။ ပထမဦးစွာ ရှေးရိုးစွဲဝါဒများကို အရင်ဆုံး ကြည့်ကြပါစို့။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှိနေသော ရှေးရိုးစွဲဝါဒများကို အာဝါဟ ဝိဝါဟမင်္ဂလာ ကိစ္စမှ စတင်၍ ကြည့်ကြရအောင်။ အရင်ဆုံးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထိမ်းမြားလက်ထပ ်မင်္ဂလာပွဲများတွင် မင်္ဂလာရှိသော သီချင်း စကားစသည်များကို ပြောရမည်ဆိုသော အတွေးအခေါ်မှာ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတရပ် အနေနဲ့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေချေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံဟုသာ စကားလှအောင် ပြောရငြား ဤအယူအဆမှာ နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုတွင် ရှိသည်ကား သေချာသည်။ ဘယ်သူက စခဲ့မှန်းလည်းမသိ ဒါပေမယ့် ဒီရှေးရိုးစွဲဝါဒကား သက်တမ်း နှစ်ရာဂဏန်းအောက်တော့ မလျော့တာ ကျိန်းသေသည်။ ဒီထက်သာ ပိုရမည်။
အဘယ်ကြောင့်နည်းဆိုသော် ကျနော်၏ အဘိုးနဲ့အဘွား မင်္ဂလာဆောင်တော့လည်း ဒီအတိုင်း။ ဆိုပါတော့ သီချင်းကိုယ်က “အခါတော်ပေးတာက နတ်ရေးငယ်ရွှေစာ သာသနာရောင်လင်း ကောင်းခြင်း ခုသည်ချိန်ခါ” ဘာညာပေါ့ဗျာ။ အဖိုးက တိုက်ပုံအဖြူနဲ့ လည်ကတုံးနဲ့ အဖွားကလည်း ဆံထုံးကြီးနဲ့ ပန်းတွေပန်လို့ပေါ့။ ကျေးဇူးရှင် အဖေနဲ့ အမေလက်ထပ်တော့လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း “ဇေယျတုမှာ ငွေခရုပါ မသွေအမှုပြုကြတဲ့ မင်္ဂလာအခါ” စသည်ဖြင့်။ ဦးကြီး ဦးလေး ဒေါ်ကြီး ဒေါ်လေးများ အိမ်ထောင်ပြုတော့လည်း ထိုနည်းတူစွာ သီချင်းလေးတွေကိုယ်က မင်္ဂလာဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးတွေနဲ့ ငြိမ့်ငြိမ့်ညောင်းညောင်း သူများတွေအားလုံးလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်း။
ဒီဘက်ခေတ်လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ပုံစံသာ နည်းနည်းကွာနိုင်ပေမယ့် အနှစ်သာရကတော့ ဒီအတိုင်းပါပဲ။ ဥပမာ အခမ်းအနား ကြေညာသူတွေက အသံကောင်းကောင်းနဲ့ “မင်္ဂလာ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဟာ မင်္ဂလာစင်မြင့်ပေါ်ကို ကြွလာတဲ့ အခါမှာ မင်္ဂလာရွှေယောက်ဖကြီးမှ မင်္ဂလာပန်းကုံးကြီး စွပ်ပေးရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးလျှင် မင်္ဂလာတီးဝိုင်းက ဖျော်ဖြေတဲ့ မင်္ဂလာတေးသံသာ များကို နားဆင်ရင်း တည်ခင်းထားတဲ့ မင်္ဂလာမုန့်များကို မင်္ဂလာဆွေမျိုးမိတ်သင်္ဂများက မင်္ဂလာရှိရှိနဲ့ သုံးဆောင်ကြပါ။” ပေါ့။
ဒါဖြင့် ကောင်းပြီ။ ဒီလိုလုပ်တော့ကော လက်ထပ်တဲ့ ဇနီးမောင်နှံတိုင်း ဘဝတလျှောက်လုံး အဆင်ပြေသလားဆိုတော့ ပြေတာလည်းရှိ မပြေတာလည်း ရှိပေါ့။ ဘယ်လိုမှလည်း တိုက်ရိုက် သက်ရောက်မှု မရှိဘူး မိတ်ဆွေတို့။ ဒီတော့ ဒီရှေးရိုးဝါဒကြီးကို ဆန့်ကျင်ကြစို့။ ဒါတွေမြင်လို့ သူကြီးက ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်တာ ဖြစ်မှာပဲ။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ ဟဲ ဟဲ။
ဥပမာ ဒီလိုဖွင့်နေကျ မင်္ဂလာသီချင်းတွေ ဖွင့်မယ့်အစား ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ အသည်းနာ ကမ္ဘာမကြေဖွင့်တော့ကော ဘာဖြစ်သေးလဲ။ “သံဃာတော်တွေ သွေးမြေကျရပြီတဲ့ ဘေးဆယ်တန် ရန်ဆယ်ပါး လွတ်ငြားမရှိ သိပါစေ” ဆိုရင် ဒေါ်မာမာအေးရဲ့ ငိုသံပါနေတဲ့ အသံလေးနဲ့ဆိုလဲ ဖြစ်တာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် လေးဖြူရဲ့ “အေးစက်လွန်းတဲ့ အပြုံးဟာ သင်းချိုင်းကုန်းကြီး တခုလိုပဲ” ဆိုလဲ ရတာပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဝတ်အဖွဲ့ခေါ်ပြီး “သုသာန်တစ သင်းချိုင်းဝ၌ မုချမသွေ စွန့်ပစ်ရလေတော့ သည်သာတည်း” ဆိုပြီး ဝတ်ရွတ်လည်း ဖြစ်တာပဲ။ ဟာ ခင်ဗျားကလည်းဗျာလို့ မျက်လုံးမပြူးနဲ့ မိတ်ဆွေတို့။ ဒီရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေဟာ လူတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ထဲမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာကို အမြစ်တွယ်နေလို့ ဒီလိုကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ရမယ်။ ဒါမှ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေနဲ့ ရန်ငါစည်း ပြတ်လိမ့်မယ်။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြ ဆန့်ကျင်ကြ။ သူကြီးရေ ဆန့်ကျင်နေတယ်နော်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေက နှစ်ပေါင်းများစွာ စွဲလန်းလာတော့ ဖြတ်ဖို့ အရမ်းခက်ပြီး အချိုမှုန့်ပမာ စွဲလန်းနေကာ ဆေးပေါ့လိပ် လုပ်ငန်းနဲ့ တူတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို မကောင်းမှန်း သိရက်နဲ့ ဆေးပေါ့လိပ်ပမာ သောက်သုံးနေကြပြန်ရော။ အနာဂျက်ဆင် ဆေးဝါးပမာ ယနေ့ခေတ် ရှေးရိုးစွဲဝါဒများ ဆိုပါတော့။
ရှေးဂျပန်လူမျိုးတွေဆိုရင် စကားလုံးတွေထဲမှာ ဝိညာဉ်ဟာ ပိတ်မိနေတတ်တယ်လို့ ကြံကြံဖန်ဖန် ယူဆခဲ့ကြတယ်ဆိုပဲ။ အခုတော့ ခေတ်မီလာပြီဆိုတော့ ဒင်းတို့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေ ရှိသေးလားမသိ။ ရှိတော့ ရှိအုံးမှာပါ။ ဒါကြောင့် လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲလို ပွဲတွေမှာ ဆိုရင် ကျကွဲတယ်တို့ ကွဲကွာတယ်တို့ ပျက်စီးတယ်တို့ ဆင်းရဲတယ် ပူဆွေးတယ် ငြိုငြင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေကို မသုံးမိအောင် ဂရုစိုက်ကြသတဲ့။ ကဲ ရှုလော့ အဆွေတို့။ ကျနော့်စိတ်ထင် ဇမ္ဗူဒီပါလက်ယာတောင်ကျွန်း ခေါ် ဒီကမ္ဘာကြီးမှာ ကိုယ့်ပါးစပ်က ထွက်တဲ့အသံ ကိုယ်ပြန်ကြောက်တတ်တဲ့ သတ္တဝါဟာ လူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကျန်နိုင်ငံတွေလည်း ဒီဝါဒကို တော်တော်ကို လက်ခံကြလေရဲ့။
ဒီတော့ ဒီလို ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ဆန့်ကျင်ကြရမယ်။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက် ကျနော်သာ မင်္ဂလာဆောင်တခုမှာ ဘိသိတ်ဆရာ လုပ်ရင် ဒီလိုပြောမယ် စိတ်ကူးတယ်။ “ဒီမင်္ဂလာပွဲဟာ ကြက်ဥကြီး ကျကွဲသလို ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့ ကွဲကွာလာခဲ့ပြီး ဒီနှစ်ရဲ့ အစပိုင်းမှာ စီစဉ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီမင်္ဂလာပွဲကြီး သန္ဓေတည် မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး ဒီပွဲကြီးဟာ နောက်အချိန် နာရီအနည်းငယ်မှာ ပျက်စီးပြီးဆုံးခြင်းသို့ ရောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူကြီး လျှာရှည်နေတဲ့ အတွက် တို့တွေ ရှေ့မှာချထားတဲ့ စားစရာတွေကို မစားရသေးတာပဲ ဆိုပြီး ဆင်းရဲ ငြိုငြင်စွာနဲ့ ပူဆွေးပြီး စိတ်မချမ်းမသာ ဖြစ်နေကြမယ် ဆိုတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်လည်း ဘိသိတ်ဆရာအလုပ်နဲ့ အိုးစားမကွဲရလေအောင် အခု ဒီမှာတင်ပဲ အဆုံးသတ်ပါပြီ။” ဒီလို ပြောတဲ့ ဘိသိတ်ဆရာတော့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။ သတို့သား သတို့သမီးရဲ့ နှစ်ဖက် မိဘ ဆွေမျိုး မိတ်ဆွေတွေ ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်းတာကို ခံရဖို့ ရှိပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က ရှေးရိုးစွဲဝါဒီ အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့ နောက်ပြီးဆွဲတွေပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို တော်လှန်ရမယ်။ လိုအပ်ရင် ယာဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး ဆင်နွှဲရမယ်။ သူကြီးကိုယ်တိုင်လည်း ယာဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေးတခု လိုအပ်နေကြောင်း ပြောခဲ့ပြီးပြီ။ နောက်ထပ် ဒုတိယအနေနဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကြီးတခုက ယောကျာင်္းကောင်းဆိုတာ ရှိုက်ကြီးတငင် မငိုရဘူး။ ကိုယ်ရဲ့ ပူပန်သောကတွေ စိတ်ဆင်းရဲတာတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဇနီးမယား မသိစေရဘူး။ လူရှေ့သူရှေ့မှာ မငိုရဘူးဆိုတဲ့ ဘယ်ကောင် လုပ်သွားမှန်း မသိတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကြီးပဲ။ ဒီဝါဒကြီးလဲ ကြာတာတော့ အလွန်ကို ကြာခဲ့ပြီ။ ရှေးခေတ် ဓားတွေ လှံတွေနဲ့ စစ်တိုက်ရတဲ့ခေတ်က သူရဲကောင်းတွေဆို ပိုတောင်ဆိုးသေးတယ်။
ကြာတော့ ဘာဖြစ်သလဲ။ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး မိတ်ဆွေတို့။ ဒီမကောင်းတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကြီးကို ဖယ်ရှားရမယ်။ လူတွေရဲ့ ပျမ်းမျှသက်တမ်းဟာ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် အသက်ပိုရှည်တယ်လေ။ ရှည်မှာပေါ့ဗျာ။ မိန်းကလေး ဆိုတာကတော့ မွေးကတည်းက ငိုခွင့်လိုင်စင် အလိုလို ရပြီးသားပဲ။ စိတ်မကောင်းရင် အဟင့် ရွှတ် ဘွတ် ဒိုင်း ဆိုပြီး ငိုချလိုက်။ ဘယ်သူမှ မကဲ့ရဲ့ဘူး။ မိန်းမတွေရဲ့ လက်နက်က မျက်ရည်လို့တောင် ပြောသေးတယ် မဟုတ်လား။
ယောကျာင်္းတွေကျတော့ ပူပင်သောကရှိလဲ ရင်ထဲမှာပဲ ကြိတ်ပြီး ခံနေကြတော့ အသက်တိုကုန်တာပေါ့။ ဒါကြောင့် ဒီအသက်တိုစေတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကြီးကို အမျိုးသားများက တွန်းလှန်ရမယ်။ ငိုစရာရှိရင် ဝမ်းနည်းတကြီး ငိုတတ်ရမယ်။ ဒီ ယောကျာင်္းဆိုတာ စိတ်ဓတ်ကြံ့ခိုင်ရမယ် ဘာညာဆိုတဲ့ ဘယ်ကောင် လုပ်သွားမှန်း မသိတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကြီးကို အချိုမှုန့်ပမာ စွဲလန်းမနေကြနဲ့။
ပြောင်းပြန်အနေနဲ့ ပြောရရင် မိန်းကလေးတွေကျတော့ မိန်းမသားဆိုတာ အားနွဲ့သူဆိုတော့ စိတ်ထိခိုက်လွယ်တယ်။ မျက်ရည်ကျလွယ်တယ် ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကြီးကို ဆေးပေါ့လိပ်ပမာ ဖက်တွယ်မနေကြနဲ့။ အဲဒါ မိန်းကလေးတွေကို ခေတ်အဆက်ဆက် နှိမ်ခဲ့တာ။ ငိုစရာရှိလည်း မငိုနဲ့။ ကြိတ်မှိတ်ပြီး ကြိုးစားပြုံးရမယ်။ စိတ်ထိခိုက်တာနဲ့ ငိုတယ်ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးဟာ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတဦး ဖြစ်ပြီး ဖောက်ပြန်ရေးသမား တယောက်ဖြစ်တယ်။
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ်။ “ဒီကတော့ မိန်းကလေးမို့ အစဉ်အလာတွေရဲ့ စည်းဝိုင်းထဲမှာ ရင်ခုန်စွာ တံခါးစေ့ရုံပဲ” တို့ဘာတို့ ဆိုတဲ့သီချင်းမျိုးတွေလည်း နားမထောင်ကြနဲ့။ မဆိုကြနဲ့။ အဲဒါ ဘယ်တုန်းကတည်းက စမှန်းမသိတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေ။ အဲဒါတွေကို တွန်းလှန်ကြ။ တွန်းလှန်ဖို့ ကြိုးစားနေသူတွေ ရှိတယ်ဆိုလို့ မဆိုးဘူးလို့ ဆိုရမယ်။
ဟိုတလောကတောင် ဒီမန်းဂေဇက်မှာ မိန်းကလေး လေးယောက်က ယောကျာင်္းလေးတယောက်ကို ဘာညာကွိကွဆိုလား လုပ်တယ်လို့ ဖတ်ဖူးတယ်။ ဒီမိန်းကလေးတွေဟာ ရှေးရိုးစွဲဝါဒ တခုကို အပွင့်လင်းဆုံး ဆန့်ကျင်တဲ့ အာဂ မိန်းကလေးတွေပဲ။ အတုယူကြပါ။ အဲဒီလောက်တော့ မလုပ်ရဲသေးဘူး ဆိုရင်တောင် ယောကျာင်္းလေး တယောက်ကို “ဒီကတော့ မိန်းကလေးမို့……..ရင်ခုန်စွာ တံခါးစေ့ရုံပဲ” လို့ သီချင်းဆိုပြမယ့်အစား “မချစ်ရင် သတ်ပစ်မယ်” ဆိုတာလောက်တော့ ပြောနိုင်အောင် ကြိုးစားကြ။ ဒီ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ စွဲလန်းနေတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ရမယ်။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒီတွေနဲ့ ရန် ငါစည်း ပြတ်ကြရမယ်။
ရှေးရိုးစွဲ အစဉ်အလာ ဝါဒတွေကို အနာဂျက်ဆင် ဆေးဝါးပမာ စွဲလန်းတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမယ်။
မိဘတွေ သဘောမတူပဲ ခိုးပြေးတာကတော့ ဟိုတုန်းကတည်းက အထိုက်အလျောက် ရှိပြီးသားဆိုတော့ သိပ်ပြောစရာ မလိုတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အစဉ်အလာ ရှေးရိုးစွဲဝါဒသမားတွေ ဖြစ်နေတာက ယောကျာင်္းလေးကပဲ မိန်းကလေးကို ခိုးပြေးရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး လုပ်ထားတယ်။ ဒါဟာ မတရားတာပဲ။ မိန်းကလေးတွေကို ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ် ဖန်တီးခွင့်မရှိဆိုတဲ့ သဘောမျိုး လုပ်ထားတာ။ အဲဒီတော့ ဒါကိုလည်း ဆန့်ကျင်ရမယ်။ မိန်းကလေးတွေက ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ယောကျာင်္းလေးကို အတင်းခိုးပြေးတာတို့ ကားတင်ပြေးတာတို့ အချစ်ကို ဓားပြတိုက်ယူတာတို့ လုပ်ကြရမယ် ဟဲ ဟဲ။
လိုအပ်ရင် သတင်းစာထဲမှာ ထည့်ပြီး ကိုကိုက သမီးကို ခိုးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သမီးက ကိုကို့ကို ခိုးတာပါလို့ ကြေညာနိုင်ရမယ်။ အမှန်တော့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေက တကယ့်ကို အများကြီး။ ဘယ်လိုမှ ဆောင်းပါးတပုဒ်ထဲနဲ့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ထင်ရှားတာလေးတွေပဲ ရေးနိုင်တယ်။
နောက်ပြီး ရှိသေးတယ်။ အမျိုးသားတွေက အမျိုးသမီးတွေကို အရာရာမှာ ဦးစားပေးရမယ် ဥပမာ အန္တရယ် ရှိရင် ယောကျာင်္းတွေက အရင်ရင်ဆိုင်ရမယ် ဆိုတာလဲ တကယ့်ကို ရှေးရိုးစွဲ ဝါဒကြီးပဲ။ ဒါကြီးလည်း ဘယ်ခေတ်က ဘယ်သူစတယ် မသိဘူး။ ကြာတာတော့ သံမဏိ သက်တမ်းပဲ။ အဲဒါ အလကား ပြောတာမဟုတ်ဘူး(မိုးပြာဆရာများ လေသံဖြင့်) မိန်းကလေးတွေကို အားနွဲ့သူတွေ ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိမ်ငယ်စိတ် ဝင်အောင်လုပ်တာပဲ။ တိုက်တန်းနစ် သဘောင်္ကြီး မြှပ်တုန်းက ရုပ်ရှင်ထဲမှာသာ လူတွေက အလုအယက် တတ်နေကြတာ။ တကယ့်အမှန်က ယောကျာင်္းတွေက အသက်ကယ်လှေတွေပေါ်ကို မိန်းမတွေ ကလေးတွေ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို ဦးစားပေး တင်ပေးပြီး သူတို့နေခဲ့ကြတာတဲ့။ သိပ်မိုက်တဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒသမားတွေ။
ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စလဲ ဆန့်ကျင်ရမယ်။ လူအချင်းချင်း အတူတူပဲ ဖြစ်ပြီး ဒီနေ့ခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေက ယောကျာင်္တွေနဲ့ ရင်ဘောင်တန်းနေပြီ ဆိုတော့ သူတို့ကို အထင်သေးပြီး အန္တရာယ်နဲ့ ကြုံရင် ယောကျာင်္းတွေကပဲ ရင်ဆိုင်ပြီး မိန်းကလေးတွေကို ဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့ ရှေးရိုးစွဲဝါဒကို ဖျောက်ကြစို့။ ဒါဟာ မဟာဖိုဝါဒလို့ ခေါ်တယ်။ ကားပေါ်မှာ နေရာလေး ဖယ်ပေးတာက အစပေါ့။ မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ထွက်ပြီး ရင်ဆိုင်ခိုင်းရမယ်။
မိန်းကလေးတွေကလည်း အစွမ်းအစကို ပြကြပါ။ ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေရဲ့ လောင်းရိပ်အောက်ကနေ ရုန်းထွက်ကြ။
နောက်ပြီး အများကြီးမှ အများကြီး ရှေးရိုးစွဲဝါဒတွေက ရေးလို့တောင် မကုန်ဘူး။ မိဦးဖဦး ဆရာဦးကို ခူး၍အရင် မစားနဲ့တို့ ဘာတို့ ဆောင်ပုဒ်တွေတောင် လုပ်ထားသေးတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆန့်ကျင်ပြီး ခေတ်မီတိုးတတ်တဲ့ လစ်ဘရယ် လူ့အဖွဲ့အစည်းဆီသို့ အမြန်ဆုံး ခရီးနဲ့ ပုဂံလုံးစီးပြီး ချီတတ်ကြပါစို့။ ဦးနှောက်ကို မုန်တိုင်းတိုက်လိုက်သည်။
နဖူးနဲ့ နံရံ ဆောင့်ပြီး ဘာလုပ်ကြမလိုကလဲဟင်.. နဖူးမှာ အသားမာ တက်အောင် ရည်ရွယ်ချက် ရှိရှိ လုပ်ချင်နေကြတာလားဟင်..